Everestmission | हरपल खबर, निष्पक्ष विश्लेषण महाप्रवन्धक भट्टराईको उपाध्यायलाई चेतावनीः तपाई पैसाको ब्रिफकेस बुझ्ने र गाँजाको व्यापार गर्ने 'नालायक'
प्रचण्ड–माधव पत्तासाफ हुँदैः केन्द्रीय सदस्यसहित दर्जनौं नेता ओली नेतृत्वमा प्रवेश
एक व्यक्तिको हत्या, तीन जना पक्राउ
गलत र त्रुटिपूर्ण राजनैतिक मार्गचित्रले मुलुक गम्भीर दुर्घटना उन्मुख: अध्यक्ष थापा
महाप्रवन्धक भट्टराईको उपाध्यायलाई चेतावनीः तपाई पैसाको ब्रिफकेस बुझ्ने र गाँजाको व्यापार गर्ने ‘नालायक’
१५ आश्विन २०७७, बिहीबार ०८:१९
काठमाडौँ, १५ असोज । रेल विभागका महाप्रवन्धक गुरु भट्टराईले पूर्वसचिव भिम उपाध्यायलाई प्रमाणका साथ प्रतिवादमा आउन चुनौति दिनुभएको छ ।
रेलको वारेमा नकरात्मक टिका टिप्पणी गर्न खप्पीस रहनुभएका पूर्वसचिव उपाध्यायलाई डोलीडारको हाकिम भएका बेला पैसाको ब्रिफकेस बुझेको पनि थाहा छ र बुझेको रकम पनि ठ्याक्कै थाहा रहेका उल्लेख गर्दै महाप्रवन्धक भट्टराईले हिम्मत भए यसको प्रतिबादमा आउनु चुनौति दिनुभयो । उहाँले मैले पुष्टी गर्न सकिन भने म जीवनबाटै राजीनामा दिने समेत उद्घोष गर्नुभयो ।
महाप्रवन्धक भट्टराईले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, ‘यो एउटा नमुना हो; नेपालको कर्मचारी संयन्त्रको चिन्तन र नालायकीपन यो भन्दा धेरै के खोज्नु? पानी सचिव भएका बेला ३ बर्ष अधिको दशैमा मेलम्चीको पानी काठमान्डौ वासीलाइ ख्वाउँछु भनेर प्रचार गर्दै फेबुमा हजारौ मान्छेको वाह वाही कमाएको मान्छे आज मेलम्चीको “मे” पनि उच्चारण गर्दैन र अन्त अन्त तिर थुतुनो जोत्दै हिडेको छ । उ बेला चर्चा कमाउन राती राती काठमान्डौमा पाइप गाडेको ठाउँमा गएर लाइभ तस्वीर पोस्ट गर्ने सचिव अन्तत मनपरी लेखेका कारण ४ दिन झ्यालखानामा बसेर आए । अचेल गाँजा ब्यापारमा लागेका छन । उनका अनुसार त नेपालले रेल चलाउँनै हुँदैन भन्ने छ । पानी सचिव भएका बेला कस्सो नेपालीले मेलम्चीको महङगो पानी पिउनु हुँदैन, मेलम्चीको पानी बहिस्कार गरौं भनेनन । मैले त उनलाइ खुला चुनौती दिएको छु; तपाइ डोलीडारको हाकिम भएका बेला पैसाको ब्रिफकेस बुझेको पनि थाहा छ र बुझेको रकम पनि ठ्याक्कै थाहा छ । हिम्मत भए यसको प्रतिबादमा आउनुस न । मैले पुष्टी गर्न सकिन भने म जीवनबाटै राजीनामा दिन्छु । गुरु भट्टराइसंग जोरी खोज्नु सजीलो बिषय छैन, यो देश लुटेर खाने किर्नाहरु म राम्रोसंग चिन्छु। गधाहाले दुधले नुहाएर गाइ बन्दैन । फेबुमा दुनियालाइ आदर्शका गफ गरेर बेबकुफ बनाए जस्तो गुरु भट्टराइलाइ बेबकुफ बनाउने कल्पना नगरे हुन्छ ।
जहाँसम्म १२९ जना कर्मचारी भर्ना गर्नु महाभारत हो भन्ने छ; गुरु भट्टराइ सामान्य काम गर्ने कामचोर फटाहा हुँदै हैन, असाधारण काम गर्छ यसले भनेरै शायद पियमकै प्रस्तावमा नियुक्त भएँ म । मुर्छा नपरे हुन्छ, १५ देखी २० दिन भित्रमा गुरु भट्टराइले कर्मचारी ब्यबस्थापन गरिसक्छ । नियुक्ति भएको भोलीपल्ट देखि पियन र जीयमको काम आफै गरेर नेपालमा रेल भित्र्याउने पनि गुरु भट्टराइ नै हो ।
जहाँसम्म रेल्वेको खर्च र आम्दानीको कुरा छ; दुनियामै रेल र अन्तराष्ट्रीय जहाज सिधा नाफामा चल्दैनन । मैले घमन्ड गरेको ठान्नु पर्दैन, रेल्वेको सम्पति ब्यबस्थापन गर्ने बजेट पाएँ भने ३ बर्षमा रेल्वेलाइ नाफामा सन्चालन गर्छु । कुन आयोजनामा कति घुष आउँछ भनेर ढुकेर बस्ने फटाहाहरुलाइ आश्चर्य लाग्न सक्छ । जहाँसम्म बजेटको कुरा छ; मकै ज्योतिषि कोही बन्नु पर्दैन । रेल संचालनको पहिलो बर्षको मेरो खर्च २० करोड छ, १० करोड आम्दानी गर्छु । १० करोड संचालन धाटा कसरी पुरा गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका म संग छ । पुर्वाधारको निम्ति सरकारले मलाइ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त छ । मैले काम गर्न पाए २ बर्षमा रेल नाफामा चलाउँछु भनिसके । आफ्नो पेशागत जीवनमा घुष मात्रै खान सिकेका जन अपराधीहरुले मलाइ पाठ पढाउनु उदेक लाग्दो बिषय हो । अख्तियारको रातो घर धाउन मन लागेर उजुक उजुक भएका मान्छे देख्दा छक्क पर्छु म । न यो ३१ किमी हो, न १० वटा स्टप छन, न त संचालन खर्च 12×4 = 48 करोड लाग्छ । मेरो बार्षिक बजेट नै ३० करोड छ जस मध्य थुप्रै कुरा त नयाँ सम्रचना तयार गर्ने बिषयमा बजेट छुट्याएको छु । ठुटे बिद्वान गाँजाको नशामा बर्बराउँछन । आफुले खाने घुष पनि संचालन खर्चमा जोडेछन । बिचरा यीनलाइ गुरु भट्टराइले एक सुका धुष खादैन भनेर कसैले भन्दिए हुने नी ।
पूर्वसचिव उपाध्यायले रेलको वारेमा सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको स्ट्याटस,
उपराष्ट्रपति पुनको रोहबरमा प्रचण्ड र बाबुरामबीच भेटवार्ता: माधवलाई कडा झड्का
दाङ, १० माघ । दाङमा घरभित्रै एक व्यक्तिको विभत्स हत्या भएको छ । प्रहरीका अनुसार राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ६
जनकपुरधाम, १० माघ । सर्लाही र धनुषाबाट हतियारसहित दुईजना पक्राउ परेका छन् । सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका ८ बस्ने ५० वर्षीय
नवलपरासी, १० माघ । नवलपुरको कावासोतीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा दुईको मृत्यु भएको छ । कावासोती नगरपालिका–८, स्थित भित्री सडकखण्डमा गए
काठमाडौँ, १० माघ । कार्यालय समयमा सवारी साधनको अत्यधिक चाप हुने भएकोले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले तनहुँमा ‘कार्यालय समय’ लागू गरिएको